Companylọ ọrụ anyị - NingBO ACE Machinery Co., Ltd.
Ningbo ACE Machinery dị ka ihe ngwọta na-eweta maka ụlọ ígwè na 25 afọ ahụmahụ .With Main ngwaahịa: Concrete vibrator, egosighị mmetụta aro, efere compactor, Tamping rammer, Power trowel, Concrete igwekota, Concrete cutter, ígwè mmanya cutter, ígwè mmanya bender na mini excavator .
Anyị nwere 6 ọmarịcha ahịa mba ofesi, ndị injinia 2 nwere ahụmịhe afọ 15, ndị na-ese 4, 3 QC na 1 QA, iji mee ndị otu egosipụtara, ndị nka nwere ọ experiencedụ jiri nlezianya na-achịkwa ihe ndị dị mkpa metụtara usoro nyocha na mmepe ngwaahịa. Ihe omuma ohuru na ihe nlere di iche iche na-eme ka oru di egwu nke ngwa anyi.
Dịka ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ahịa, anyị ga-achọ itinye onwe anyị na akpụkpọ ụkwụ ndị ahịa iji ghọta ọnọdụ ha ka anyị na-eweta ọrụ ndị ahịa na-arụ ma na-arụ ọrụ nke ọma kwa ụbọchị. Na ACE, anyị ghọtara na ire igwe anyị nye ndị ahịa abụghị njedebe nke azụmahịa mana mmalite ọhụrụ nke mmekọrịta dị oke ọnụ. Mgbe ịzụrụ ngwaahịa anyị, ndị ahịa na-enweta otu uru ndị a n'otu oge ahụ.
1. Ọrụ klas mbụ site na otu ndị ahịa ahaziri nke ọma, nke gosipụtara
2. Otu afọ nkwa dị mma
3. etgwọ mpi
4. Ngwa ngwa ngwa nnyefe
5. Ihe omuma ahia na ahia ahia
6. OEM iji na ahaziri imewe
7. Ngwa ngwa zaghachi ndị ahịa ajụjụ
8. Ogo ngwaahịa na e exported na mba 50
Ozi: Anyị na-enye onyinye iji wuo ihe owuwu ihe owuwu ga-eme ka ọrụ gị dị mfe